MCPA စာမေးပွဲများ — MYSTERY ZILLION
November 2010 edited December 2010 in Tech News
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းအသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲများကို ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းနှင့် အသင်းခွဲများရှိရာ မန္တလေးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ် နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် တပြိုင်နက် ကျင်းပစစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ နိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း၏ စာမေးပွဲများမှာ အိုင်တီပညာရှင်များအဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလိုသော ကျောင်းသူ/ ကျောင်းသားများ၊ အသင်းဝင်များအတွက် အရည်အချင်းကို အသိအမှတ်ပြုခံနိုင်ရေးအတွက် ဦးတည်စစ်ဆေးသော စာမေးပွဲ များဖြစ်သည်။
အဆိုပါစာမေးပွဲများသည် Professional နယ်ပါယ်သို့ စတင်ဝင်ရောက်ရန်အတွက် အဓိကလိုအပ်သော အသိပညာ များနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို ဦးတည်စစ်ဆေးသော စာမေးပွဲများဖြစ်သည်နှင့်အညီ စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများသည် ပညာရှင် နယ်ပယ်တွင် စတင်လုပ်ကိုင်သည့် အခြေအနေသို့ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
(1) MCPA Certified Fundamental Software Engineer (FSE)
(2) MCPA Certified Software Engineer (SE)
(3) MCPA Certified Network Associate (NA)
(4) MCPA Certified Network Professional (NP)
ü စာမေးပွဲကျင်းပမည့်နေ့ - ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၉) ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့)
ü စာမေးပွဲပြုလုပ်မည့်အချိန် - နံနက် (၉း၀၀) နာရီမှ နေ့လည် (၁၂း၀၀) နာရီအထိ
ü နောက်ဆုံးစာရင်းပေးသွင်းရမည့်နေ့ - ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၅) ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)
ü စာမေးပွဲကျင်းပမည့်နေရာ - Function Hall (2), မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်, လှိုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေ
မှတ်ချက်။ ။ MCPA အသင်းဝင်များအား ၁ဝ% Discount ပေးပါမည်။
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင်(၄)၊ အခန်း(၄)၊ မြန်မာအင်ဖို တက်ခ်၊ လှိုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေ၊ ဖုန်းနံပါတ် ၆၅၂၂၇၆ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
MCPA ရဲ့ စာမေးပွဲတွေအကြောင်းတစ်ချို့ ဒီမှာ ရေးထားတာရှိပါတယ်။
ကျနော် အရင်တုန်းကပြောဖူးသလိုပဲ ...စာမေးပွဲကြေးပိုယူချင်ယူပါ။ ကျနော်တို့ကိုပေးမဲ့လက်မှတ်လေးတွေကို စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ်လေးတွေမပေးပဲ ... လူရိုသေ ရှင်ရိုသေလေး ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါရစေ ... MCPA မှ ဆရာပေါင်းတို့ခင်ဗျာ .....
Internet Journal တွေဖတ်ရင်းနဲ့ MCPA Certified Exam တွေအကြောင်းသိလာရပါတယ်။ အစကတော့ ဖြေဖို့စိတ်မပါခဲ့ဘူး။ နောက်တော့ .. ၆လ မှာမှတစ်ခါစစ်တာ ပြီးတော့ ကိုယ်အထင်ကြီးထားတဲ့သူတစ်ချို့တောင် မအောင်သေးတာတွေ့တော့ ဒီလက်မှတ်က အမှန်တကယ် အဆင့်အတန်းရှိတဲ့လက်မှတ်ဖြစ်မှာပဲလို့ ယူဆပြီး ဖြေချင်စိတ်လေးပေါ်လာတယ်။ ( တကယ်လဲ အဆင့်တစ်ခုရှိတဲ့စာမေးပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဖြေခဲ့တဲ့သူတွေသိမှာပါ )။ ပြီးတော့ Internet Journal မှာ စာမေးပွဲအောင်တဲ့သူတွေရဲ့ ရုံးကို Congratulation Latter ပို့ပေးမယ်။ ကိုယ်ရဲ့အလုပ်မှာ လစာတိုးဖို့၊ ရာထူးတိုးဖို့အတွက်အများကြီးအကျိုးရှိမှာပါ ဆိုပြီး MCPA တာ၀န်ရှိသူတစ်ဦးကပြောတယ်လို့ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒါကို တော်တော်ခိုက်သွားခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ဖြေမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးဖြေခဲ့တယ်။ မိုးနတ်မင်းကြီးကျေးဇူးနဲ့ အောင်သွားခဲ့ပါတယ်
စာမေးပွဲဖြေပြီးတဲ့အထိ တကယ်ကို ကောင်းပါတယ်။ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ အဆင့်မှီမှီဖြေခဲ့ရပါတယ်။ သို့သော် Internet Journal မှာဖတ်ခဲ့ရသလို ရုံးကို Congratulation Latter မရောက်ပါဘူး။ အသင်းကို ဖုန်းဆက်မေးတော့ လူကြီးတွေကို ပြန်မေးပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ MCPA တာ၀န်ရှိလူကြီးမင်းကပဲ ပြောသလိုမလုပ်တာလား Internet Journal ကပဲ မပြောတာရေးတာလားတော့ ကျနော်လဲမသိပါ။ ဒါကတော့ အသေးစားလေးပါ။
10.7.10 ( စနေနေ့ ) မှာ Infotech မှာ Certificate တွေ ပေးပါတယ်။ ITPEC ရယ်၊ MCPA (Software) ရယ်၊ MCPA (Network) ရယ်။ အဲမှာ အသဲကွဲတာဗျာ။ ITPEC လက်မှတ်လေးတွေပေးတော့ Framework လေးတောင်ပါသေးတယ်။ တော်တော်ကောင်းတာပဲ။သူတို့က စာမေးပွဲကြေးလဲများတော့ ကောင်းကောင်းရမှာပေါ့လို့တွေးလိုက်တယ်။ ကိုယ့်လက်မှတ်လေးလဲ ကောင်းကောင်းလေးပဲနေမှာပါလို့ ထင်ခဲ့တာ။ MCPA လက်မှတ်လဲကျရော A4 စက္ကူနဲ့ Printing ထုတ်လိုက်တဲ့အတိုင်း ပါပဲဗျာ။ ဒီလက်မှတ်ကိုင်ပြီး ဒါ Professional လက်မှတ်ကွ လို့တောင်မပြောရဲလောက်အောင် Miserable ဖြစ်နေတာပါပဲဗျာ။
ကျနော်တို့ကတော့ MCPA လက်မှတ်ကို CCNA, MCSA လက်မှတ်တွေလို Professional Certificate တစ်ခုအနေနဲ့ ခန့်ခန့်သန့်သန့်ရဖို့မျှော်လင့်ခဲ့တာပါ။ တကယ်လို့များ ဒီလက်မှတ်ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်က IT Industry တစ်ခုမှာ အလုပ်သွားလျောက်တဲ့အခါမှာ အလုပ်ရှင်က ဒီလက်မှတ်အကြောင်းသိတယ်ဆိုရင်တော့ ထားတော့ မသိတဲ့သူဆိုရင် စာရွက်ပုံစံကြည့်ပြီး ဘာ Impression မှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။
MCPA မှ လူကြီးမင်းတို့ရေ .
ဒီဇင်ဘာမှာ စစ်မဲ့ MCNA, MCNE (or) MCNP လက်မှတ်တွေကျရင်တော့ လူရိုသေ ရှင်ရိုသေလေး လုပ်ပေးပါဆရာတို့ရေ
ခင်ဗျားကမှ စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ် ဖြစ်နေတယ်ထားဦးတော့ လက်မှတ်မြင်ဖူးသေးတယ် ကျွန်တော်ဖြင့် လက်မှတ်ကိုမမြင်ဖူးတာ ဘယ်လိုပုံမှန်းကိုမသိဘူး။
ဒီလိုလုပ်ဗျာ။ စာမေးပွဲဖြေပြီးလို့အောင်တယ်ဆိုရင် ကို်ယ်လိုချင်တဲ့ လူရိုသေရှင်ရိုသေပေါ့ဗျာ။ ခင်ဗျားသုံးချင်တဲ့ငွေအမောင့်ရှိတဲ့ ကဒ်ကို၀ယ်ပြီးသူတို့ကိုသွားပေးလိုက်ပါလား။ အဲဒါဆိုအိုကေလောက်တယ်ဗျ။
သူတို့လဲ ငွေမကုန်ခင်ဗျားလဲ စိတ်ချမ်းသာ။ သားကောင်းလေးတွေကိုဂုဏ်ပေးကြပါဗျာ။
စာမေးပွဲဖြေဖို့ ဘယ်ဘာသာရပ်တွေကိုလေ့လာရမှာလဲခင်ဗျာ..... ဖြေဖူးထားတဲ့သူများရှိရင်လည်း လေ့လာထားသမျှနဲ့ မေးခွန်းပုံစံလေးများ ပြန်လည်မျှေ၀စေလိုပါတယ်........
စာရွက်မကောင်းတာကတော့ ထားလိုက်ပါတော့... Name လေးကိုတော့ computer လေးနဲ့ print ထုတ်ထားတာလေးဖြစ်သင့်တာပေါ့... ခုတော့ ကိုယ်ပဲ စာရွက်ကောက်ရလို့ ကောက်ဖြည့်လိုက်သလိုလိုနဲ့.....
ဖြေရမှာ အားရှိချင်စရာကြီး...... ဘာတွေမေးပြီးဘာတွေဖြေရတယ်... စာမေးပွဲမတိုင်ခင် ဘာတွေလေ့လာထားရတယ်ဆိုတာ နည်းနည်း မျှေ၀ပေးပါဦးခင်ဗျာ.... စာရွက်လေး တစ်ရွက်လောက် ကော်ရချင်လို့ပါ...........
Exam Preparation (Intensive Course) သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ စစ်ဆေးလျက်ရှိသော MCPA Certified Network Associate (NA) စာမေးပွဲတွင် ဖြေဆိုအောင်မြင်သူများတိုးတက်လာစေရန် ရည်ရွယ်၍ စာမေးပွဲအထောက်အကူပြုသင်တန်း “Exam Preparation (Intensive Course)” ကို အောက်ဖော်ပြပါ အစီအစဉ်အတိုင်းသင်ကြားဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းဖွင့်မည့်ရက် - ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂) သောကြာ၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ။
သင်တန်းအချိန် - နံနက် ၉:၀၀ နာရီမှ ညနေ ၅:၀၀ နာရီ အထိ
သင်တန်းကြေး - ၁၅၀၀၀ ကျပ်
သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည့်နေရာ - MCF,eLearning Center, Myanmar Info- Tech
သင်ကြားမည့်ဆရာများ - ဦးအောင်စိုးမိုး (Assembler)၊ ဦးအောင်ဇော်မြင့် (MST)၊
ဦးဇော်ဝင်းထွန်း (Biznet)၊ ဦးရဲကျော်သိန်း ( Compu Tech)
မှတ်ချက်။ ။ MCPA စာမေးပွဲများဖြေဆိုရန်စာရင်းသွင်းပြီးသူများသာ သင်တန်းတက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
ကိုလူပျိုပြောလို့ ရှိတဲ့ပုံတင်ပေးလိုက်တယ် ...
အဲဒါကို A4 နဲ့ Print ထုတ်လိုက်တဲ့ပုံကို စဉ်းစားတာကြည့်တော့ ...
MCPA အသိအမှတ်ပြု စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းများ ထုတ်ပြန်
ယနေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာ ပညာရှင် အသင်းက ၁၉.၁၂.၂၀၁၀ က ကျင်းပခဲ့သော (http://www.facebook.com/notes/mcpa/-2/186299764717260) အသင်း အသိအမှတ်ပြု စာမေးပွဲများ၏ အောင်စာရင်းများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ Fundamental Software Engineer စာမေးပွဲတွင် ၃ဦး နှင့် Network Associate စာမေးပွဲတွင် ၇ဦး၊ စာမေးပွဲ အောင်သူ စုစုပေါင်း ၁၀ဦး ရှိခဲ့ပြီး Software Engineer နှင့် Network Professional စာမေးပွဲများတွင် အောင်မြင်သူ မရှိခဲ့ပါ။
အသင်းခွဲများ ရှိရာ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းများမှ ၄၂ဦး ဝင်ရောက် ဖြေဆိုခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ် အောင်သူ ၁၀ဦးမှာ ရန်ကုန်မှသာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ Fundamental Software Engineer စာမေးပွဲတွင် တစ်တိုင်းပြည်လုံး ဖြေဆိုသူ ၂၅ဦး အနက် အောင်မြင်သူ ၃ဦးနှင့် အောင်ချက်မှာ ၁၂ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပြီး Network Associate စာမေးပွဲတွင် တစ်တိုင်းပြည်လုံး ဖြေဆိုသူ ၁၂၁ဦး အနက် အောင်မြင်သူ ၇ဦးနှင့် အောက်ချက်မှာ ၆ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည်။
ဤစာမေးပွဲများကို အိုင်တီပညာရှင်များ အဖြစ် အသက် မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုလိုသော ကျောင်းသူ/ ကျောင်းသားများ၊ အသင်းဝင်များ အတွက် အရည်အချင်းကို အသိအမှတ်ပြု ခံနိုင်ရေးအတွက် ဦးတည်စစ်ဆေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါစာမေးပွဲများသည် Professional နယ်ပါယ်သို့ စတင်ဝင်ရောက်ရန် အတွက် အဓိကလိုအပ်သော အသိပညာ များနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို ဦးတည်စစ်ဆေးသော စာမေးပွဲများ ဖြစ်သည်နှင့်အညီ စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများသည် ပညာရှင် နယ်ပယ်တွင် စတင်လုပ်ကိုင်သည့် အခြေအနေသို့ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
Result List (27.12.2010)
MCPA Certified Fundamental Software Engineer Exam (19.12.2010)
Sr.No Roll. No Center Name Grade
1. FSE - 04101014, Yangon, Su Thinzar Aung, .
2. FSE - 04101024, Yangon, Zin Mon Oo, [C].
3. FSE - 04101019, Yangon, Ye Wint Aung, [C].
MCPA Certified Network Associate Exam (19.12.2010)
1. NA - 04101048, Yangon, Sai Kyaw Kyaw Htun, [C].
2. NA - 04101066, Yangon, Tin Myo Lwin, [C].
3. NA - 04101026, Yangon, Kyaw Zin Hein, [C].
4. NA - 04101060, Yangon, Su Nwe Htun, [C].
5. NA - 04101010, Yangon, Hein Min Latt, [C].
6. NA - 04101012, Yangon, Htain Lin Aung, [C].
7. NA - 04101033, Yangon, Moe Zaw Win, [C].
MCPA Certified Software Engineer Exam (19.12.2010)
MCPA Certified Network Professional Exam (19.12.2010)
FSE Pass Rate
ဗျဲလရမ်းအကုန် အအောင်ပေးတဲ့ မြန်မာပြည်ပညာရေးစံနစ်တွေထဲမှာ ...
အခုလိုမျိုး အရည်အချင်းမမှီရ င်ဘယ်သူ့မှ အအောင်မပေးပဲထား လိုက်တာမျိုး ... ကြိုက်တယ်ဗျာ ... .
အမှန်ကတော့ ... မေးသွားတဲ့မေးခွ န်းတွေကြောင့်လဲ ပါတယ်။
ကျနော်တို့ ဖြေဖူးသမျှစာမေး ပွဲတွေထဲမှာ အခက်ဆုံးဖြစ်နေတ ယ်။ နောက် ဘာတွေကြည့်ရမလဲ သေချာမသိဘူး။
ဘာပဲပြောပြော ... အခုလို ညီညီညာညာ အကုန်လုံးကျတဲ့စာမေးပွဲတစ်ခုကို မြင်လိုက်ရတာ ... အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အမြင်နဲ့ ၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ ...
( ကျနော်လဲ ကျတဲ့အထဲပါတယ်ခင်ဗျ ... :P )
လာမယ့် ဒီဇင်ဘာမှာ MCPA က NA ၀င်ဖြေချင်လို့ ဘာတွေလေ့လာထားရမလဲ ကိုအလက်ဇန်းဒါး ရေ.. ကျွန်တော်ကို အီးဘုတ်လေး ညွန်းပေးပါဦး........
အရင်နှစ်ကမေးသွားတဲ့မေးခွေးဟောင်းကိုဖြေကြည့်ပါတယ်... ဟဟ.. အဖြေနဲ့တိုက်ကြည့်တော့လွဲနေပါလား :P :P